सरकारले वार्ता चाहेको छैन : मोर्चा - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
सरकारले वार्ता चाहेको छैन : मोर्चा
कात्तिक १८ । काठमाडौं, संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले वार्ताका लागि सरकार तत्पर नभएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेको छ। मोर्चाले वार्ता सकारात्मक रूपमा अघि बढेका बेला सरकार दमनमा उत्रिएर वार्ताको वातावरण बिगारेको पनि आरोप लगाएको छ,नागरिक दैनिक लेख्छ
मोर्चाले आफूहरू भने वार्ताका लागि जतिबेला पनि तयार रहेको जनाएको छ। ‘वार्ता गर्ने सरकारले शान्तिपूर्ण आन्दोलनकारीमाथि बिहानै आगो लगाउने काम गर्न मिल्छ?’ मोर्चाका नेता एवं सद्भावना पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले नागरिकसँग भने, ‘वार्ता गर्ने तरिका हो यो ? बन्दुक देखाएर वार्ता हुन्छ? सरकारले नै वार्ता चाहेको छैन। हामी त जुनसुकै बेला वार्ता बस्न तयार छौं। हामी बसेकै पनि हौं।’
मोर्चाले अघि सारेको मागलाई नाजायज भन्दै कमजोर बनाउने प्रयास सरकारी तवरबाटै भएको जनाउँदै त्यसका लागि जति समय लागे पनि माग पूरा नहुन्जेल आन्दोलन फिर्ता नहुने महतोले बताए।
उनले वार्ताबिना पनि सरकारले आफूहरूले अघि सारेका माग पूरा गर्न सक्ने धारणा राखे। जायज माग पूरा नभए आन्दोलनले अर्कै मोड लिन सक्ने उनले चेतावनी दिए।
‘हामीले ११ बुँदे माग अघि सारेका छौं,’ महतोले नागरिकसँग भने, ‘वार्ता नभए पनि सरकारले त्यसलाई हेरेर माग पूरा गर्न सक्छ। होइन भने हामीलाई यी माग नाजायज छन् भनेर विश्वस्त पार्न सक्नुप¥यो।’
उनले अन्तरिम संविधानमा भएको व्यवस्था कायम रहनुपर्ने र तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग भएको सहमति कार्यान्वयन नभएसम्म आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता नहुने बताए।
‘सरकारी वार्ता टोलीले शीर्ष तहमा बसेर निर्णय गर्ने भनेको थियो, तर सरकार अहिलेसम्म शीर्ष तहमा वार्ता गर्नै तयार देखिँदैन। यसले सरकार नै माग पूरा गर्न तयार देखिँदैन,’ महताले भने।
उनले मधेसकेन्द्रित दल र मधेसी जनता अब एउटै मागका लागि पटक–पटक लड्न तयार नरहेको बताए। ‘एउटै मागका लागि जति दिन पनि लडिन्छ,’ महतोले भने, ‘मधेसी जनताको धैर्यता टुट्ने अवस्था आए या हामीले आन्दोलनको नेतृत्व छाडिदिए मधेस प्रदेश होइन देशको माग हुन सक्छ।’
महतोले आपूmले आन्दोलनको नेतृत्व गरेर नै मधेस प्रदेशको मागलाई थामिरहेको दाबी गरे। ‘मलाई अहिले पहाडीविरोधी भनेर काठमाडौंका मान्छेले गाली गरिरहेका छन्,’ महतोले भने, ‘तर, यो आन्दोलन मुलुकको हितमा छ। मलाई गाली गर्दैमा राष्ट्रवादी भइँदैन।’
मधेसी मोर्चाले संविधान संशोधनका लागि सरकारले नै कांग्रेसलाई पनि सहमतिमा ल्याउन पहल गर्नुपर्ने बताएको छ। ‘संविधान संशोधन गर्ने काम मुख्य पार्टीहरूको जिम्मेवारी हो,’ महतोले भने, ‘सबैलाई मिलाउने गरी वार्ताको नेतृत्व सरकारले लिनुपर्छ। कांग्रेस पनि सरकारले नै मिलाउनुपर्छ। संविधान बनाएको पार्टी हो कांग्रेसलाई पनि बाइपास गर्न मिल्दैन। सरकारले पहल गर्नुपर्छ। त्यसपछि कांग्रेसले सहयोग गरेन भने जनताले थाहा पाउँछ।’
तर, सरकार मोर्चाले लगाएको आरोप सही नभएको तर्क गर्छ। सरकारले पनि वार्ताका लागि आपूmहरू जतिबेला पनि तयार रहेको जनाएको छ। वार्ता समिति सदस्य एवं कानुनमन्त्री अग्नि खरेलले वार्तामार्फत नै समस्याको समाधान हुन्छ भनेर सरकारले वार्ता टोली बनाएको बताए। ‘हामीले वार्ता गर्दैनौं भनेका छैनौं,’ खरेलले नागरिकसँग भने, ‘पछिल्ला घटनालाई लिएर उहाँहरू (मोर्चा नेता) पनि उत्तेजित हुनुपर्दैन। सरकारसँग वार्ता नगरी माग कसरी पूरा हुन्छ ? वार्ताका लागि प्रतिबद्ध नभएको भए आह्वान किन गथ्र्यौं? हामी वार्तामार्फत समस्याको समाधान हुन्छ भन्नेमा अडिग छौं। वार्ताको वातावरण बनाउने काम गरेका छौं।’